होटल सांग्रिलाले ल्यायो ‘दशैं भोज’ प्याकेज - Sudur Khabar
महाकाली नदीमा आधा दर्जन पुल बन्छन्ः भारतीय राजदूत राय अझै राहत पाएनन् दौड तोलेनीका बाढीपीडितले २५ क्षमताको कारागारमा ४८ जना कैदी ! ममताको उपचारका लागि १० लाख ३५ हजार रुपैयाँ सहयोग राष्ट्रपतिको छोरीको हातमा सुनैको बाला ! हिराजडित औँठी, घाँटीदेखि सिउँदोसम्म गहनैगहना ! होटल सांग्रिलाले ल्यायो ‘दशैं भोज’ प्याकेज
प्रकाशित मिति: October 5, 2016
१९ असोज, काठमाडौं । नेपालीहरुको महान चाड विजया दशमीको अवसर पारेर पाँचतारे होटल सांग्रिलाले ‘दशैं भोज’ प्याकेज ल्याएको छ । असोजको २३ देखि २६ गते (अष्टमी नवमी, दशमी र एकादशी) गरी चार दिनसम्म चल्ने प्याकेजमा मौलिक नेपाली खाना खुवाइने भएको छ ।
राजधानीबासी तथा दशैंमा घर जान नपाउनेहरुलाई लक्षित गर्दै ल्याइएको लन्च तथा डिनर प्याकेज हो । ‘दशैं भोज’ प्याकेज सस्तो र सुलभदरमा उपलब्ध गराउन लागिएको छ । स्वदेशी विदेशी दुबै ग्राहकलाई एउटै मूल्य तोकिएको होटलका एक्जिक्युटिभ सेफ महेशराज ढकालले जानकारी दिए ।
मुख्य खानातर्फ भेजका लागि ११ सय र नन भजका लागि १४०० सय रुपैयाँ प्रतिव्यक्ति शुल्क तोकिएको छ । मुख्य मेनुमा कालो खशीको लेदोबेदो (ग्रेभी), मिक्स तरकारी, गोबी केराउको तरकारी, झानेको साग, आलु तारेको, जिम्बुले झानेको कालो मासको दाल, नौनी घ्यू हालेको भात र फापरको रोटी उपलब्ध हुनेछ । यसैगरी साँधेको फलफूल पनि उपलब्ध गराउने होटलले जनाएको छ । दशैं विशेष चिजको केक पनि प्याकेजमा छ ।